Ogaden News Agency (ONA) – Booqashadii ONA ee Magaalada Godey, Q2-aad.
Booqashadii ONA ee Magaalada Godey, Q2-aad.
Posted by Dulmane	/ February 27, 2019
Magaalada Godey ee xarunta Gobolka Shabeelle, oo sidaan kasoo sheekaynayba ah magaalo baaxad leh oo ay dad badan kunool yihiin ayaa ah mid aad ugu liidata dhinaca adeega bulshada taas oo ay laqabto magaalooyinka kale ee wadanka Ogadenia.
Magaalada Godey oo uu maro wabiga wayn ee Shabeele ayaa ah mid baahi wayn uqabta dhinaca biyaha nadiifta ah, waxaana magaalada biyaha siiya Gaadhi Dameer ama Kareeto taas oo xaafadaha ka iibisa biyaha ay wabiga kasoo dhaamayaan.
Dhinaca kale magaaladu malaha beero qudaar ah iyadoo kutaala dhul-beereed aad uwayn iyo waliba wabi aan go’aynin, waxaana arinkaas kalifay dhibaatooyinkii aan kasoo sheekaynay ee shacabka haystay sanadihii lasoo dhaafay.
Dhinaca amaanka magaaladu waxay umuuqataa mid aad uga soo kabanaysa waxayna ishaadu qabanaysaa dad badan oo wadanka kacararay ama dibadaha ku noolaa oo hada dib ugu soo laabtay kuwaas oo lafilayo in ay isbadal wayn keeni doonaan.
Sidoo kale badhtamaha magaalada waxaa kababanaya Calankii sadex midablaha ahaa ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO), kaas oo mudo rubuc qarni ah aan laga sudhin magaalada Godey iyo guud ahaan gayiga Ogadenia.
Dadka shacabka ah ee magaalada Godey kudhaqan oo ah dad Gobonimo iyo nabadgaliyo jecel isla markaana usoo halgamay Gobonimada shacabka ayaa kuu sheegaya in ay ku ildoogsanayaan bidhaanta calanka JWXO iyo waliba xafiisyada JWXO ee wadanka laga furayo.
Magaalada Godey waxay magaalooyinka waawayn ee Ogadenia kudhaantaa dhinaca Korontada taas oo Gobolada kale ee wadanku aysan lahayn, wuxuuna adeega Korantadu wax kabadalay nolosha shacabka.
Dadka shacabka ah ee kudhaqan Magaalada Godey ayaa doonaya in ay horay usocdaan, waa hadii ay helaan amaan iyo adeeg maamul oo hufan, waxaana lafilayaa in hadii dadku ay si xor ah u ganacsadaan ay hamigooda gaadhi doonaan inshaa Allah.